B2B ပေါ့တ်ကာစ်တင်ခြင်း 101 | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဇွန်လ 14, 2011 တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာလ 30, 2012 Douglas Karr
သောကြာနေ့တိုင်း 3PM တွင်တိုက်ရိုက်လွှင့်သောအပတ်စဉ်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုသင်သဘောပေါက်ပြီးပြီဖြစ်သည်။ အသုံးချ BlogTalkRadio, ထိုပြပွဲထို့နောက်မော်ကွန်းတင်ပြီးနှင့် Podcast တခုကို iTunes ကိုတွန်းအားပေးနေသည် အသံအရည်အသွေးအပြင်ဘက်မှာတော့ BlogTalkRadio ကကျွန်တော့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ထက်ကျော်လွန်နေတယ်။
Podcasting အတွက်အကြံဥာဏ်ရယူဖို့အင်တာနက်ကိုဝိုင်းရံနေတဲ့အချိန်မှာဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်များစွာရှိတယ် Audacity or ကွမ်းခြံကုန်း သင်၏အသံကိုတိုးတက်စေရန်၊ သင်၏ဆိုဒ်တွင်ထည့်သွင်းရန်ကစားသမားများ၊ ဝယ်ရန်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ပြီးနောက် iTunes ပေါ်ရှိ podcast တစ်ခုစီကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်တင်ခြင်းအားဖြင့်သင်စိတ်ရှုပ်ထွေးရသည်။ ဤသည်အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းများအတွက်လမ်းအများကြီးလွန်း ... ဒါဖြစ်ပါတယ် BlogTalkRadio စုံလင်သောဖြေရှင်းနည်းတခုဖြစ်ပါတယ်။
BlogTalkRadio နဲ့ငါတို့လိုအပ်တာက မိုက်ကရိုဖုန်းကောင်းတယ် နှင့် Skype ကို guests ည့်သည်များနှင့်ဆက်သွယ်ရန်…သင်အမှန်တကယ်လိုအပ်သည့်အရာများပင်မဟုတ်ပါ၊ သင်၏ဖုန်းဖြင့်သာဖုန်းဆက်ပြီးသင်သွားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ BlogTalkRadio သည်သင်၏ပြသမှု၊ your ည့်သည်များနှင့်အသံများကိုအလွယ်တကူစီမံနိုင်စေမည့် switchboard အသစ်တစ်ခုကိုထုတ်လွှင့်သည်။ ထို့အပြင် BTR သည်သင်၏ show ကို Facebook နှင့် Twitter တို့နှင့်ပေါင်းစည်းရန်ခွင့်ပြုပြီး၎င်းမှကြေငြာချက်များသည် show (ကြောက်မက်ဘွယ်အင်္ဂါရပ်) ။
ကျနော်တို့ကပြပွဲအပေါ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ရန်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်နည်းပညာခေါင်းဆောင်များလိုက်ရှာနေကြသည်။ နားထောင်သူပိုမိုများပြားရန်နာမည်ကြီးများထားခြင်းသည်နည်းဗျူဟာတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ၊ ထိုနာမည်တူစက်ဝိုင်းများ၌ကျွန်ုပ်တို့၏အမည်များကိုတစ်သမတ်တည်းဖော်ပြရန်သေချာသည့်နည်းဗျူဟာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိကကော်ပိုရေးရှင်းများ၌အလုပ်လုပ်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပညာရှင်များကိုလိုက်စားသည်။ တနည်းအားဖြင့်ကျနော်တို့ပြပွဲအပေါ်ဖြစ်ဖို့အလားအလာဖောက်သည်ပစ်မှတ်ထားကြသည်! ၎င်းသည်ဆိုးညစ်သောအသံဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်လုံးဝအလုပ်လုပ်သည်။ ကျနော်တို့စျေးကွက်ခေါင်းဆောင်များနှင့် Fortune 500 ကုမ္ပဏီများကိုပြသနိုင်ဖို့ဆက်လက်သွားမယ်။ သူတို့ကနားထောင်သူနှစ် ဦး စလုံးရဲ့တန်ဖိုးကိုသာမကကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ဘာလုပ်သလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့အခွင့်အရေးပေးလိမ့်မယ်။
podcasting လုပ်ရန်မလွယ်ကူသောကြောင့်စာရေးသူများ၊ ဘလော့ဂါများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များသည်ပြပွဲတွင်တက်ရောက်ရန်အခွင့်အရေးရလိမ့်မည်။ ဘလော့ဂ်များလောက်များပြားလှသော Podcasts များမများပါ။ ထို့ကြောင့်ကြားရသောအခွင့်အလမ်းသည်များစွာမြင့်မားပါသည်။ ထိုပြပွဲများတွင်ပါဝင်ခြင်းသည်သူတို့၏အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားဖြစ်သည်။
ဒါက ... ကျနော်တို့ကသူတို့ကို Hard- ရောင်းဖို့ပြပွဲအပေါ်ဆွဲယူမထားဘူး။ သူတို့ကိုယ်တိုင်၊ သူတို့၏ကုမ္ပဏီနှင့်သူတို့၏မဟာဗျူဟာကိုမြှင့်တင်ရန်ပရိသတ်အား၎င်းတို့အားအကြံဥာဏ်များနှင့်စကားပြောဆိုမှုများကိုပေးသည်။ အကယ်၍ our ည့်သည်ကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်ဆက်နွယ်မှုကိုအော့ဖ်လိုင်းဆက်လုပ်ရန်အမြဲတမ်းအခွင့်အရေးရှိပါတယ်။
Podcast အတွက်ရည်မှန်းချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့သည် -
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာအဆက်အသွယ်ပုံစံပေး။ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုနေ့စဉ်ကွင်းဆင်းများနှင့်ဆက်သွယ်သည် - ၎င်းတို့အများစုသည်ပြပွဲအတွက်အခွင့်အလမ်းများဖြစ်သည်။
မှတဆင့်ဘလော့ဂါများကိုရှာပါ ဘလော့ဂ်ရှာဖွေမှုများ, PostRank နှင့် Technorati တူညီတဲ့အကြောင်းအရာများအပေါ်ပြောသော။
ကဲ့သို့သောအစီအစဉ်များတွင်အခြား Podcasters များကိုရှာပါ iTunes က နှင့် Stitcher.
ငါတို့ပြောသောအကြောင်းအရာများနှင့်သက်ဆိုင်သောအသစ်သောစာအုပ်များမှစာရေးသူများကိုရှာပါ။ စာရေးဆရာများသည်သူတို့၏စာအုပ်များမှစကားလုံးများကိုထုတ်ဝေရန်အဆက်မပြတ်ကြိုးစားနေကြပြီး Podcast များကအခွင့်အလမ်းကောင်းများပေးသည်။ စာရေးသူအများစုသည်အခွင့်အလမ်းတွင်ခုန်ချလိမ့်မည်။ သူတို့ site ကိုရှာပြီးသူတို့နဲ့ဆက်သွယ်ပါ။
အားဖြင့်ပြပွဲမြှင့်တင်ရန် သင့်ဘလော့ဂ်သို့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုပေါင်းစပ်ခြင်း နှင့်လူမှုရေးစာမျက်နှာများ။ Podcasts တွေကလူတွေကိုအလုပ်လုပ်နိုင်၊ နားထောင်နိုင်အောင်အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုပေးတယ်။ နားထောင်နေသည် အသံရဲ့အသံသံကိုကြားရသော်လည်းစာဖတ်ခြင်းမှကြီးမားသောခြေလှမ်းတစ်ခုလှမ်းသည်။ ၎င်းသည်နားထောင်သူများအားယုံကြည်မှုပိုမိုမြန်ဆန်စေပြီးသင့်ကိုယုံကြည်စေသည်။
ဇွန်လ 15 ရက် 2011 ခုနှစ် နံနက်9နာရီ 35 မိနစ်
သင့်ရှိုးကို နှစ်သက်သည်၊ ၎င်းကို အမြဲတမ်း တိုက်ရိုက်မဖမ်းနိုင်သောကြောင့် ပေါ့တ်ကာစ်များကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး အချိန်ရသည့်အခါ နားထောင်ရသည်မှာ ပျော်စရာကောင်းပါသည်။
လက်ကိုင်အသံဖမ်းစက်နှင့် Audacity ကိုအသုံးပြု၍ ပေါ့တ်ကာစ်လုပ်နေသည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သော်လည်း BlogTalk ရေဒီယိုသည် အလွန်လွယ်ကူပါသည်။ ၎င်းကို itunes တွင်မတင်မီ နောက်ဆုံးအစီအစဉ်ကို တည်းဖြတ်ဆဲဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏အဆိုပြုချက်များတွင် လူကြိုက်များသောပရိုဂရမ်အချို့ထံသို့ လင့်ခ်တစ်ခုကို စတင်ထည့်သွင်းထားပါသည်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မနက် 10:30 မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသေးစားအစီအစဉ်အတွက် ပရိသတ်ကို ဖန်တီးပေးရင်းနဲ့ မင်းဆီက သင်ယူရမှာပါ။